Wafdigii Dowlada Somalia ee laga celiyay Kismaayo oo ka hadlay Sababaha loo celiyay – SBC
Wafdigii Dowlada Somalia ee laga celiyay Kismaayo oo ka hadlay Sababaha loo celiyay
Posted by Webmaster on Noofember 9, 2012 Comments
Gudigii dowlada Federalka Soomaaliya ay u dirsatay Magaalada Kismaayo balse laga soo celiyay ayaa ka warbixiyay sababaha magaaladaasi looga celiyay .
Mid ka mid ah Wafdihii dowlada ee Ka degay Kismaayo Balse loo diiday in ay gudaha u galaan dibna ugu soo noqday Magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Salaad Cilmi Axmed islamarkaana u waramay Warbaahinta waxaana uu sheegay in markii ay gaareen magaaladaas ay u diideen saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugan in ay magaalada Gudaha u galaan.
“Waxaan la kulanay waxyaabo aanaan fileyn, sababtoo ah meel dalkaaga ka mid ah oo aadan idhaheyn Gumeysi ayaa heysta oo lagaa horistaago, laguna yiraahdo ‘magaalada ma gali kartid, tanta aad u socotana kama fushan kartid'” ayaa uu yiri xubintaasi ka tirsan wafidiga.
Waxa uu intaasi ku daray Salaad in intii ay ku sugnaayeen Magaalada Kismaayo Garoonkeeda diyaaradaha aysan arag sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaalida ah, ciidamada sheeganaya Amisom ee Kenyanka ahna aanay wadan wax calaamad cadeyneysa in ay Amisom ka tirsan yihiin waa sida uu hadalka u dhigaye.
Xubintan ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedada loo celiyay ay ka fahmeen in maamulka magaalada Kismaayo ka jira aanu dooneynin in wafdigaasi ay gudaha u galaan Kismaayo howlaha ay u socdaana ka fushadaan.
Wafdigan ayaa ahaa kuwo ka socday Madaxtooyada islamarkaana madaxweynaha Soomaaliya uu u diray magaalada Kismaayo si ay ula socdaan Dhuxul tiro badan oo taala hareeraha dekeda Magaaladaasi, sida ay saameynta ugu leedahay bulshada, iyo inta ay tiro la egtahay.
Noofember 9, 2012 at 2:59 pm
Kismayo,ma sidii Katanga oo ah dalka congo,oo beri hore,Mr moise Tshombe,oo goostay baa,Dagaal ooge Axmed Madoobe iyo maleeshiyadiisa ay u goosteen.
waxaa iyana,soo baxaya ujeedada kenya ee qabsashada gobolka jubada hoose siiba magaalada kismaayo,oo u eg in ay doonayso,in aanay halkaasi ka bixin ama ay ka dhigato,xayndaab ay ku ilaaliso xududeeda.hada waxaa soo kordhay kismaayo,oo la mid noqotay hagaysa oo horay uga go’day somalia.waa in arimahani aan la dhayalsan.
waa in la joojiyaa in umadda lago qaybiyo qabiil,dadka soomaaliyeed,oo dhan baa iska leh geyiga Somalia.muwaadinka soomaaliyeed meeshii uu ka joogo.somalia waa dhulkiisii lagamna xigo,lamana dhoofin karao.wax yabaha hada jira waxaa keenaya dagaaladii qabiilka,waana laga gudbi.
Noofember 17, 2012 at 12:04 am
asalamu calaykum asxaabta somaliyeed xiisahle sharaftale qaaliga walaalahyga ah balse xididnimadii walaaltinamadii wadanimadii wada jirkii midnimadii dhamadeen balse somalia dagalo sokeeyo somareen qabiil lgu dagalmeyo ilaa iyo 22 sano hada lefterkeega daagal dhaamad laheyn ayaa ka tagan dhulkeena hooyo kenya iyo ethiopia waa labo wadan waraabo ah waliba ku hamineyan dhulkeena hooyo iney kal qeybsadan gumeysi geliyan ilahow adega noo maqan na soo gadh hada waqoyiga somalia balse la magac bexen somaliland waxay hoostagan ethiopia waliba maamusha waliba waraga dowlada ethiopia usoo jeediso somaliland warkaas ayey ku maamusha bulshada somaliyeed waqooyiga keniya konfurta iyada gacanta ku heysa hada kismaayo waxa ka tagan calankii kenya kama tagno calnkii qaranka somalia marka somalia wala kal qeybsadeye hala jihaado kuley dunida lagu waari maayo magac kaga tega aduunka waliba la dagalama cdowga dhulkeena hooyo booboyo somali weyn koley ma imaneyso balse ilahay soo nooleyo waxan qaban karno majirto kenyan gabdhada waseyo walasha weyseyo siduu doono ka yeeleyo hantdaada dhceyo taasa inoo dambeysa somaliyey hadeynu tashen weyney afrkan ayaa inoo ful fuleya hablaheena quruxda laha somaliyeed war hooy damiir iyo dadnimo mey nigu jirta warka hooy waar kaca hooy hada gacan gumeysi ayey ku jirta somalia magaca mabka ayuu ugu yaala caalamka lakiinse dadkiisa majiro marka labo ayaa wadan ayaa kal qeybsaneya waliba kuwa kula jaarka ah kenya ethiopia